होसियार ! यस्ता संकेत देखिएमा हुनसक्छ आँखामा इन्फेक्सन, बनाउँनसक्छ दृष्टिबिहिन – Khabaarpati
October 10, 2020 October 10, 2020 Khabar PatiLeaveaComment on होसियार ! यस्ता संकेत देखिएमा हुनसक्छ आँखामा इन्फेक्सन, बनाउँनसक्छ दृष्टिबिहिन
काठमाडौँ । आँखा चिलाउँदा धेरैको बानी हुन्छ हातले मिच्ने । हातले मिच्दा आँखा चिलाउने मात्र हैन, आँखा रातो समेत हुने गर्छ । अझ हात फोहोर छ भने त त्यसले आँखामा विभिन्न किसिमका संक्रमण निम्त्याउन सक्छ ।त्यसैले त चिकित्सकहरू सकेसम्म आँखा नमिच्न, हात नलगाउन तथा नकन्याउन सुझाव दिने गर्छन् ।
१ . आँखा रातो हुने : यो सबभन्दा सामान्य लक्षण हो । यो आँखामा श्वेतपटल, इपिस्क्लेरा र सिलियरी रक्तनलीहरुको तातोपन र रातोपन हुन्छ । यो संक्रमण पोल्ने, सूजन, चोटपटक, ट्युमर आँखाभित्रको चाप बढेमा हुन्छ ।२. दुखाई : आँखामा चोट पटक, रसायपिक यान्त्रिक,शारीरिक संक्रमण, सूजन वा आँखाको भित्री चाप बढेमा हुन्छ । आँखामा कसेर पसेमा , कर्नियामा चोटपटक भएमा ग्लाउकोमामा पनि पीडा हुन्छ ।
६. उज्यालोदेखि आँखा तर्सिने : कर्नियाको सूजन, एफाकिया, आइराइटिस र आँखाको अल्विनिज्म मा हुुन्छ । समान्य रुपामा धेरै रुवा,इन्पल्युएञ्जा भाइरल ज्वरोमा पनि आँखाले हेने गाहो हुन्छ ।७. आँखाको अगाडि भिल्को देखिनु : यो virtuous opacities मा देखिने हो तर यसले खास मतलब राख्दैन । कहिलेकाहीँ भिल्को देखिएमा चretinal detachment and posterior uveitis भएको संका गर्नुपर्दछ ।
८. टाउको दुख्ने : आँखाको कारणले पनि टाउको दुख्छ तर आँखालाई बल पर्ने काम गरेमा वा चश्माको पावर नमिलेमा पनि टाउको दुख्छ ।९. दोबर दृष्टि : आँखाका मांसपेशीहरुको आघात वा रक्तस्राव, सूजन चोटपटक वा केन्दीय स्नायू प्रणलीका तेस्रो चोथौ र छैटौ केन्द्रीय मस्तिष्क पक्षघात भएमा पनि दोब्बर दृष्टि देखिने गर्छ ।
-आँखामा वरफ वा चिसो पानीले सेक्दा पनि चिलाउने समस्या कम हुने गर्छ । त्यस्तै, नरम कपडालाई पानीमा भिजाएर करिब २० मिनेटसम्म उक्त कपडालाई आँखामा राख्नाले पनि आँखा पोल्ने, चिलाउने, सुन्निने तथा रातो हुने समस्याबाट छुटकारा पाउन सकिन्छ ।-चिसो दूधको प्रयोग गरेर पनि आँखा चिलाउने समस्याबाट राहत पाउन सकिन्छ । कपासलाई चिसो दूधमा केही समय भिजाएर त्यसलाई बेला बेलामा आँखाको वरिपरि राख्नाले पनि आँखा चिलाउने समस्याबाट राहत पाउन सकिन्छ ।
– घाम, पानी, धुलो, धूवँ लगायतका कारण पनि आखाको एलर्जी हुनसक्छ । आँखाको एलर्जी भएमा आखा पोल्ने, चिलाउने तथा रातो हुने गर्दछ । घरबाहिर निस्कनु परेमा चश्माको प्रयोग गरेर पनि आँखा चिलाउने समस्या कम गर्न सकिन्छ ।-आँखा बेसरी चिलाएमा तुरुन्तै चिसो पानीको फोहराले आँखालाई पखालेर पनि यो समस्याबाट राहत पाउन सकिन्छ । त्यसको लागि पानीको फोर्स भने धेरै हुनु हुँदैन ।
– गुलाव जलको प्रयोयद्वारा पनि आँखा चिलाउने समस्या कम गर्न सकिन्छ । केही थोपा गुलाव जलको प्रयोगले सुरुमा त आँखामा केही जलन होला तर फेरि आराम पनि तुरुन्तै हुन्छ ।– चिकित्सकको सल्लाह अनुसार आइड्रपको प्रयोग गरेर पनि आँखा चिलाउने समस्या कम गर्न सकिन्छ । यस्ता आइड्रप जुनसुकै औषधी पसलमा सजिलै किन्न पाइन्छ । किन्नुअघि चिकित्सकको सल्लाह लिन भने निकै आवश्यक मानिन्छ ।
डाइबिटिजालई कन्ट्रोल गर्दछ मात्र यी ३ चिजले, आफ्नो खानामा जरुर गर्नुहोस् सामिल May 13, 2021
यी राशिका पुरुषले गर्छन पत्नीलाई अथाह माया, कहिलै दिदैनन् दु:ख May 13, 2021